Toa tsy mahita mangirana mihitsy ity ny Malagasy eo amin’ny tontolon’ny herinaratra. Raha notanterahin’ny Filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, tokoa mantsy ny fampanantenana nataony tamin’ny fanafoanana ny delestazy, nandritra ny fotoana nitantanany ny firenena, miverina …Tohiny
Tanana zatra mitsotra ny an’ny Mapar, ka tsy afaka mivonkona intsony. Tany Morondava, ny dahalo fahavalom-bahoaka mihitsy no nantsoin’ny olon’ ny Mapar, izay tarihin’ny depiote Hawel Mamod’Ali, hiakatra ny tanàna hamoritra ireo vahoakan’i Morondava. Efa …Tohiny
Naseho teo anoloan’ny fitsarana, omaly ireo olona miisa fito voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona teny Andraisoro. Roa tamin’ireo no fantatra fa naiditra am-ponja eny Tsiafahy, ary dia ny vadin’ity renim-pianakaviana ity, sy ny lehilahy iray …Tohiny
SEFAFI : Tsy manjary ny seraseran’ny Ceni
Taorian’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, ny Ceni indray izao no nahazo tsindrim-paingotra avy amin’ ny SEFAFI, na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Nambaran’ny SEFAFI, fa tsy maharaka ny seraseran’ny Ceni, ka mety hitarika korontana, …Tohiny